Abiy, Injiinar Taakkalaa kantiibummaa magaalaa Finfinnee irraa kaasaa jira!! Kichuu
HomeAfaan OromooVideosAbiy, Injiinar Taakkalaa kantiibummaa magaalaa Finfinnee irraa kaasaa jira!!
Abiy, Injiinar Taakkalaa kantiibummaa magaalaa Finfinnee irraa kaasaa jira!!
Finfinnee irraa kaasaa jira. Habashoota itti naannesseera. Abiy ilma nafxanyaati kan jenneef lafaa kaaneetii miti. Dubbannaa isaa osoo hin taane gocha isaa hubanneet jenne.
Bakkayyuu habashoota naqaa jira.
Baay’inarra qulqullina fi gahumsa wayya.ODP bakka bu’aa takka qofa qabaatteef waan nu falmisiisu Ykn nu sodaachisu hin jiru.Tokkichi Qixxee Kumaa nuuf jira Taakkalaa Uumaa .Kanaaf Abshir
OMN:ዕለታዊ ዜና (AUGUST 02, 2019)
Holola adii kana dhiisaa.
Ummanni keenyas itti dammaquun qabdu. “Dhaabboliin siyaasaa Oromoo tokko tahuu qabdu. Tokko tahaa nutti koottaa…” jedhee akka ummanni gaafatu miti dubbiin. Kana holola siyaasaaf OPDO’tu akka ummanni afarsu godha. Ummanni keenya garuu irra caalaan dhugumaan gaarii yaadee gaafata.
Faallaa isaa dhaabolii siyaasaa Oromoon abdatu lameen (ABO fi KFOn) yeroo wal tahanii fi hooggantoonni isaanii lamaan wal biratti argaman ammoo, warruma “Dhaaba siyaasaa Oromoo tokko qofa feena…” jedhee laagaa jaldeessaatiin buukumsu kanneentu maqa balleessuu hinjirre hooggantoota kana irratti labsa.
Waan dachii kanarra hin jirree fi jechoota safuu hawaasaa cabsaniin arrabsu.
Kun ammoo akka TOKKUMMAAN dhaabbolii kanaa holola kanaan gufatuuf itti yaadameeti. Akka kubbaatti ummataan taphachuun OPDO yoom nurraa dhaabbata?
OMN:ከወላይታ፣ ሀዲያ፣ ከፋ እና ጉራጌ ምሁራንና የፖለቲካ ድርጅት ተወካዮች ጋር የተደረገው ቆይታ(AUGST 02, 2019)
New information about ADP and TPLF | የህዉሓት እና አዴፓ አስታራቂ/ ለመሰለፍ የተዘጋጁት
OMN: ዕለታዊ ዜና (August 01, 2019)
Dagaagsaa Iraasee: Hin Dide Qeerrootu Dide ** Oromo Music 2018 New